အာရေဗျပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမုန်တိုင်းအမည်များ
By mmweather.ygn, on June 11th, 2014%
မုန်တိုင်းများဖြစ်လာပါက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ မီဒီယာသတင်းများ မှန်ကန်စေရေး၊ သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ် ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားမှု ရှိစေရေးနှင့် မုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မည့် လူမှုအသိုင်းအဝန်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ တိုးတက်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြစေရေး စသည့်အချက်များကြောင့် မုန်တိုင်းများကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ကြစေရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည်ပေးခြင်းကို လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များစွာကပင် စတင်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။
အစပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း အမည်များကို အဆင်ပြေသလို ပေးခဲ့ကြသော်လည်း ၂ဝ ရာစု အလယ်ပိုင်းမှ စတင်၍ မုန်တိုင်းများ၏အမည်ကို အမျိုးသမီးအမည်များ ပေးခဲ့ကြကြောင်း၊ မိုးလေဝသပညာရှင်များက ထိုအမည်များကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်အလိုက် (ဥပမာ – A=Anne – နှစ်တစ်နှစ်အတွက် ပထမဦးဆုံး စတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် မုန်တိုင်း) အမည်ပေးရန် နောက်ပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၌ဖြစ်ပေါ်သော မုန်တိုင်းများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ . . . → Read More: အာရေဗျပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမုန်တိုင်းအမည်များ
Leaveacomment ဆောင်းပါး Cyclone Naming, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ် MMWeather ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ..
Leaveacomment မှတ်တမ်း, ဆောင်းပါး mmweather အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီသတင်း VS ကြိုတင်အသိပေးသတင်း
One comment ဆောင်းပါး 31W, HAIYAN, YOLANDA နှုတ်ဆက်ရတော့မည့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မုန်တိုင်းရာသီ
အထက်အညာဒေသက မိုးကိုမျှော်နေစဉ် မိုးက မလာ၊ လာတော့လည်း အလုံးအရင်းနှင့်လာ၏။ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး လာ၏။ အကြွေးမျှော်နေသူကို လာဆပ်သည့်ပမာ “သည်လောက်တောင် ရှိလှတာ ရော့ – အင့်” . . . → Read More: နှုတ်ဆက်ရတော့မည့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မုန်တိုင်းရာသီ
Leaveacomment ဆောင်းပါး သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (အဆုံး)
Leaveacomment ဆောင်းပါး, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း FB-Post လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W နှင့် 95W
Leaveacomment မိုးလေဝသအခြေအနေ, မှတ်တမ်း, ဆောင်းပါး Andaman Sea, Bay of Bangal, East Phillipines Sea, NW-Pacific, South China Sea ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ?
Leaveacomment သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, မြေငလျင်, မြေငလျင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတ ငလျင်ပြင်းအား နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်ခြင်း Older Entries »